Ku noqoshada Iskuulka - Rosemount-Apple Valley-Eagan ISD 196
Dib ugu soo dhawow! Taariikhaha cusub ee bilowga sanadkan ayaa ardayda u dejin doona guul!
Ogost 30-31 – Maalmaha kala guurka dugsiga xanaanada (maalmaha nuska ah)
Sibtambar 1-2 - Maalmaha qiimaynta ardayda dugsiga hoose / Maalinta Koowaad ee Dugsiga
Sibtambar 1-2 - Dugsi Sare "Maalmaha Guusha Ardayda" / Maalinta Koowaad ee Dugsiga
Sibtambar 8 - Fasallada caadiga ah waxay dib u bilaabaan fasallada 1-12
Sibtambar 9 - Fasallada caadiga ah waxay dib u bilaabaan dugsiga xanaanada
Qaybtani waxay ka kooban tahay macluumaad caawimaad leh si loo hubiyo in adiga iyo ilmahaagu aad diyaar u noqotaan maalinta koowaad ee dugsiga. Liisaska qalabka dugsiga, booqo websaydhka dugsiga ilmahaaga.
Ka-doorbid si aad u hesho Farriimaha Qoraalka
Degmada 196 waxay u isticmaashaa qoraalka sida habka isgaarsiinta. Qoraallada waxaa lagu soo gudbiyaa iyadoo la adeegsanay SchoolMessenger, oo ah adeegga ogeysiinta ballaaran ee degmadu u isticmaasho wicitaannada taleefannada iyo farriimaha iimayalka. Waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah waa inay doortaan inay helaan fariimaha qoraalka ah. Fariimaha caadiga ah iyo xadiyada xogta waa lagu dabaqi karaa.
*Kaliya nambarada SMS-ka ee ku qoran liistada Nidaamka macluumaadka ardayda ee Infinite Campus ayaa heli kara qoraallada.
Linkiyo waxtar leh
Khariidadda Degmada iyo Xiriirrada Dhismaha
Codsiga Cunno Bilaash ah & Qiimo Dhimis ah
Goobjooge Aagga Iskuulka
1: 1 Kheyraadka iPad-ka Ardayga
1: 1 Kheyraadka iPad-ka Waalidka
Sannad Dugsiyeedka 2021-22 GUUDMARKA XUQUUQAHA IYO MAS’UULIYAADKA ARDAYGA
Maxaa Cusub 2021-22?
Waqtiyada Bilowga iyo Dhamaadka Dugsiga ee 2021-22
Dugsiyada Bilowga Hore (Pinewood, Southview, Highland iyo Deerwood): 7:45 a.m. - 2:05 p.m.
Dugsiyada Late Start (dhammaantood): 9:30 a.m. - 3:50 p.m.
8:20 a.m. - 3:10p.m.
Dugsiga Dhexe ee Valley ee STEM 7:55 a.m. - 2:45 p.m.
Iskuulka Daraasaadka Deegaanka: 7:45 a.m. - 2:15 p.m.
Xarunta Waxbarashada Aagga: TBD